प्रकाशको स्मृतिमा ७ गते श्रद्धाञ्जली सभा
काठमाडौं । प्रचण्ड निवास लाजिम्पाटमा सोमबार बिहान बसेको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालयको बिस्तारित बैठकले मंसीर ५ गतेका पूर्व निर्धारित कार्यक्रमहरु प्रकाश दाहालको शोकसभामा परिणत गर्दै चुनावी अभियानलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । प्रकाश दाहालको अल्पायुमा भएको असामयिक निधनमा सिङ्गो पार्टी शोकाकुल भइरहेको बेला सन्निकट रहेको चुनावलाई असर पर्न नदिन माओवादी केन्द्रले चुनावी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन लागेको हो ।
यसै सन्दर्भमा पार्टी अध्यक्ष दाहालको चुनावी जिल्ला चितवनमा मंसिर ५ गतेको लागि तय भएको वामगठबन्धनको चुनावी सभालाई प्रचण्डले सम्बोधन गर्ने निश्चित भएको चितवनका इञ्चार्ज सूर्य सुवेदी पथिकले जानकारी दिएका छन् । पुत्र शोकमा डुबेका पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले आइतबारै चुनावी कार्यक्रम नरोक्न निर्देशन दिएका थिए । मंसिर ७ गते केन्द्रीय रुपमा लाजिम्पाटमा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम गरिने भएको छ ।
अध्यक्ष प्रचण्डसँगै चुनावी कार्यक्रममा खटिएका प्रकाश दाहाल गत मंगलबारदेखि आफूलाई केही विसन्चो भएको भन्दै चितवनबाट काठमाडौं फर्किएका थिए । सामान्य रुघा–खोकी र हल्का ज्वरो आएको कारण उनी आफ्नै निवास लाजिम्पाटमा आमासँगै आराम गरिरहेका प्रकाशले शनिबार बेलुका आमा र भान्जीहरुसँगै बसेर जाउलो खाएर सुतेको पारिवारिक स्रोतले बताएको छ । प्रचण्ड चुनावी कार्यक्रमको लागि झापा पुगेका थिए भने श्रीमती विना मगर चुनावी कार्यक्रमको लागि कंचनपुर थिइन् । सँधैजसो विहान सबेरै उठ्ने प्रकाश विहान पाँच बजेसम्म नउठेपछि आमा कोठामा हेर्न जाँदा अचेत अवस्थामा देखेकी थिइन् । अनि उनलाई तुरुन्तै सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा नर्भिक हस्पिटल पु¥याइएको थियो । तर हस्पिटलले दिएको जानकारी अनुसार उनी हस्पिटल आउनुभन्दा करिब ३÷४ घन्टाअघि प्राण त्यागिसकेका थिए । उनको निधन आकस्मिक ह्दयघातको कारण भएको नर्भिक हस्पिटलले जनाएको छ ।
आइतबार विहान उनको निधनको खबर आएसँगै हस्पिटलदेखि पार्टी कार्यलय र पशुपति आर्यघाटसम्म पार्टीपंक्ति र सर्वसाधरणको भीड लागेको थियो । सुरक्षाकर्मीलाई भीड व्यवस्थापनमा निकै हम्मेहम्मे परेको थियो ।
पार्टीद्वारा शोक वक्तव्य
दाहालको पार्थिव शरीरलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा पुयाएपछि अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको झण्डा ओडाएर श्रद्धाञ्जलि दिएका थिए । प्रकाशलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा ‘वादल सहित पार्टीका नेताहरु तथा अन्य पार्टीका नेताहरु पेरिसडाँडा पुगेका थिए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीका पोलिटव्यूरो सदस्य प्रकाश दाहालको निधन भएकोमा गहिरो शोक व्यक्त गरेको छ । पार्टीले दाहालको निधनबाट सिंगो पार्टी शोकाकुल भएको उल्लेख गर्दै गहिरो शोक व्यक्त गरेको छ ।
माओवादी केन्द्रले एक मात्र छोराको निधनबाट पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र सल्लाहकार सीतासँगै सिंगो परिवारमा परेको चोटबाट पार्टी अत्यन्त मर्माहत भएको उल्लेख गरेको छ । प्रवक्ता भुसालले दाहालको निधनबाट पार्टीले एउटा जुझारु, उदीयमान नेता र व्यवस्थापक गुमाएको उल्लेख गरिन ।
पार्टीद्वारा जारी शोक वक्तव्यमा दाहालले युद्धकालको कठिन संघर्षमय दिनहरुमा खेलेको भूमिकाको पनि स्मरण गरिएको छ ।
दुई वर्ष अघि जेठो सन्तान क्यान्सर पीडितको कारण गुमाएको दाहाल परिवारमा अहिले प्रकाशको निधनले थप बज्रपात थपिएको छ । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड छोराको निधनको खबर सुनेसँगै विर्तामोडबाट हेलिकोप्टरबाट काठमाडौं आए । तर छोरालाई श्रद्धाञ्जली दिदै गर्दा उनका आँखामा आँसु छछल्किए । उनले छोरालाई दागबत्ती दिदै गर्दा प्रस्फुटन हुन खोजेको हृदयको भावलाई जनमानसलाई अभिवादन गर्दै मोड्न प्रयत्न गरे । आमा सीता दाहाल छोराको निधनले सम्हालिनसक्नु अवस्थामा रहेकी छन् । उनी छोराको शरीरमा श्रद्धाञ्जली दिन आउन समेत सकिनन् । प्रकाश दाहालका दुई दिदीहरु रेणु दाहाल र गंगा दाहाल भावविभोर अवस्थामा बाबुसँगै थिए । प्रकाशकी जेठी श्रीमती सिर्जना त्रिपाठी ६ वर्षीय छोरा बोकेर नर्भिक पुगेसँगै बेहोस भइन् । त्यस्तै कान्छी श्रीमती विना मगर कञ्चनपुरबाट नर्भिक हस्पिटल पुग्दा विक्षिप्त अवस्थामा थिइन ।
प्रकाशको निधनमा समवेदना व्यक्त
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको परिवारमा परेको पुत्र शोकमा समवेदना दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मंसिर ४ गते सोमबार प्रचण्ड निवास लाजिम्पाट पुगेकी थिइन । भण्डारीले पूर्व प्रम तथा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड र सल्लाहकार सीता दाहाललाई भेटी यो शोकको घडीमा धैर्यधारण गर्न आग्रह गरेकी छन् ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लाजिम्पाट निवास पुगेका छन् । चुनावी कार्यक्रममा व्यस्त रहेकोले आइतवार फोनबाटै समवेदना दिए पनि भोलिपल्ट प्रम देउवा र अध्यक्ष ओली प्रचण्ड निवास लाजिम्पाट पुगी समवेदना व्यक्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रकाश दाहालको निधनबाट देशले होनाहार र इमान्दार छोरा गुमाएको बताए । ‘प्रकाशको निधनको खबरले म निकै भावविह्वल बनेको छु’ देउवाले भने ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रकाशको निधनले राष्ट्र र पार्टीमा क्षति पुगेको बताउँदै धैर्यधारणका लागि कामना गरेका छन् । ओलीसँगै पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाले बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले अध्यक्ष प्रचण्डको परिवारलाई धैर्यधारण गर्न आग्रह गरे ।
त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र उनका परिवारलाई भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले आइतवार एक वक्तव्य पठाई समवेदना व्यक्त गरेकी छन् । बेलायती राजदुत रिचार्ड मोरिसले सोमबार प्रचण्ड निवासमा पुगी समवेदना व्यक्त गरेका छन् । राजदूत मोरिसले प्रचण्ड परिवारको शोकमा बेलायत साथमा रहेको बताएका छन् । त्यस्तै प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले सोमबार लाजिम्पाटमा पुगी प्रचण्ड परिवारलाई समवेदना प्रकट गरेका छन् ।
आइतबार क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य किरण, पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्तिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्द, नेकपा मसालका महामन्त्री मोहनबिक्रम सिंह, एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतम, महासचिव ईश्वर पोखरेल, नेपाली कांग्रेसका नेताहरु प्रकाशमान सिंह, गोपालमान श्रेष्ठ, डा. प्रकाशशरण महत लगायतका नेताहरुले समवेदना प्रकट गरेका छन् ।
आइतबार बेलुकादेखि नै विभिन्न दल, नेता, सामाजिक अगुवा र सर्वसाधारणले लाजिम्पाट निवासमा पुगी अध्यक्ष प्रचण्ड र परिवारलाई समवेदना प्रकट गर्ने क्रम जारी छ ।